” နောက်ဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခု ရလိုက်တာမို့ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ” နောက်ဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခု ရလိုက်တာမို့ “
” နောက်ဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခု ရလိုက်တာမို့ “
Posted by ခင်ခ on Jun 18, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary |5comments
သြော် မိုးလေးက ရွာလေတော့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မိုးသံတွေသာလွှမ်းပြီး တိတ်စိတ်ကာ အိပ်မောကျနေ ကြတာ ကျုပ်မှာ အိပ်မပျော်နိုင်သေးဘဲဖြစ်နေရင်းနဲ့ အတွေးတွေထဲ အဖြေရှာမိလေရဲ့ဗျာ။
တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမားနှင့် ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်း လူတန်းစားခွဲခြား အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ နယ်ချဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်မှုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ အဲလို မနေချင်လို့ ဒို့မြန်မာပြည်ကြီးတော့ လွတ်လပ်ရေး ရမှ ဖြစ်မယ်ဆိုပြီး တစ်စိုက်မတ်မတ် သခင်အောင်ဆန်း ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှု့ကြောင့် ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နာဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးကို ဦးမော့ကာကြွေးကြော်နိုင်ခဲ့သည် ဒို့မြန်မာပြည်ကြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီလို့။
အဲဒီအချိန်မှာ သခင်အောင်ဆန်းကတော့ အာဇာနည်အဖြစ် ဘ၀ကူးခဲ့လေပြီ ဒါပေသည့် သူမျှော်မှန်းထားခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့ နယ်ချဲ့လက်အောက်မှလွတ်မြောက်လို့ လွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာမို့ သေသည်ထိ သူမျှော်မှန်း ခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်အတွက် သူအလိုချင်ဆုံး လွတ်လပ်ရေးဟူသော ရည်မှန်းချက်ကြီးတော့ ပြည့်ခဲ့ရသည်မို့ လူပင်သေသော်လည်း စွမ်းနိုင်သူအဖြစ် မြန်မာသမိုင်းမှ သမိုင်းကြောင်းကောင်း သမိုင်းကြောင်းလှ ခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း အဖြစ်ပြည်သူတိုင်းလက်ခံနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒါပေသည့် သူမျှော်မှန်းသော လွတ်လပ်ရေးရည်မှန်းချက်သာပြည့်ခဲ့ပြီး သူမျှော်မှန်းခဲ့သော လွတ်လပ်ရေး၏ အရသာ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ယနေ့ထက်တိုင် ပြည့်ကောပြည်ခဲ့ ရခဲ့ကြပါသလား သူဘာတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး လွတ်လပ်ရေးရဖို့ အဆင်းရဲခံ အသက်အသေခံပြီးလုပ်ခဲ့တာလည်း ရှင်းပါတယ် တောင်သူလယ်သမား အလုပ် သမားနှင့် ပြည်သူတွေကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်း လူတန်းစားခွဲခြား အဖိနှိပ်ခံနေရတဲ့ နယ်ချဲ့တိုင်းတစ်ပါးအုပ်ချုပ်မှုကို မခံနိုင်လွန်းလို့ပင်ဖြစ်ပေသည်။ အခုဆို လွတ်လပ်ရေးရပြီး နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကျော်လေပြီမို့ အချိန်ကာလအရ တော့ လုံလောက်ကျော်လွန်တဲ့အချိန်လို့ ပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရပါတယ် တကယ်ရော သူမျှော်လင့်ခဲ့သလို ဒို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်နေပြီလား? တောင်သူလယ်သမား အလုပ်သမား နဲ့ ပြည်သူတွေဟာ လူတန်းစားအလွှာ မခွဲကြားဘဲ တန်းတူရည်တူ တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းတွေနဲ့ ပြည့်ဝသော ပြည်နိုင်ငံဆိုတာ ယနေ့မြန်မာပြည် အတွက် ဘယ်အခန်းကဏ္ဍက သွားကြည့်ရမလဲလေ။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု လူတန်းစားကွာဟမှု အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလန်း နည်းပါးမှု ပြည်သူလူထုအတွက် တရားမျှတမှု တိုင်းပြည်တိုးတက်မှု ဆိုဒါတွေ ဘာဖြစ်လို့ မဖြစ်ခဲ့ရတာလဲ အဲလို နိုင်ငံမှာ ကျုပ်တို့ဘာကြောင့် နေခွင့်ရတာလဲ ကျုပ်အဖြေရှာတဲ့ အနေနဲ့ တွေးကြည့် လိုက်တယ်
အကယ်လို့သာ ၁၉၄၇ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသာ မကျဆုံးခဲ့သေးဘူး ဆိုရင် ……………………
အကယ်လို့သာ ၁၉၆၀ ခုနှစ်မှာ ၀န်ကြီးချုပ် ဦးနု တိုင်းပြည်ကို ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်း လက်ထဲ အိမ်စောင့်အစိုးရ အဖြစ် မအပ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ………………………….
အကယ်လို့သာ ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဦးဆောင်သော တပ်မတော်မှ အာဏာမသိမ်းဘူး ဆိုရင်…..
အကယ်လို့သာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဦးနေ၀င်းက ကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလောကက လုံးအနားယူတော့မှာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်နဲ့အတူ ၁။ ဦးစန်းယု ၂။ ဦးအေးကို ၃။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်ထင် စသည့်ဖြင့် နိုင်ငံရေးလှည့်ကွက် မဖော်ဆောင်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်…………..
အကယ်လို့သာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင်ဦးဆောင်သော တပ်မတော်က အာဏာလွဲပြောင်း မယူဘူး ဆိုရင် ………..
အကယ်လို့သာ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးစောမောင် အာရုံကြောချို့ယွင်းတဲ့ရောဂါမဖြစ်ခဲ့လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးသန်းရွှေ လက်ထဲအာဏာ မရောက်ခဲ့ဘူး ဆိုရင်………………
အကယ်လို့သာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်မှာ စစ်ဘောင်းဘီချွတ် အသွင်ပြောင်းအရပ်သား သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မဟုတ်ခဲ့ဘူး ဆိုရင် ………………….
အဲလို အဲလို ဆိုရင်……………. တွေနဲ့ ဒို့မြန်မာပြည်အတွက် အဖြေရှာနေစဉ် နောက်ဆုံးတော့ အဖြေတစ်ခု ရလိုက်တာမို့ ဆက်မစဉ်းစားတော့ဘဲ အိမ်မပျော်မှုတွေတစ်စခန်းရပ်လို့ အိပ်ဖြစ်သွားတော့တယ်လေ။
ကျုပ်ကို ဒီမြန်မာပြည်မှာ အကယ်လို့သာ မမွေးဖွားခဲ့ဘူး ဆိုရင်…………………။
သာမန် နွားကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်သာဆိုလျှင်. . .. . .
မှားပြီးရင်းမှား​နေတဲ့ အမှား စကွဲယားက သချာင်္နည်းနဲ့​တော့ အမှန်​တဲ့
ဒီရက်ထဲ ကျုပ်ဖတ်နေတာ၊ တွေးနေတာ ကို အကြားအမြင်များ ရနေရော့ သလား။
None of us earned these things.
They were given to us.
(Stanford University’s 123rd 2014 Commencement address by Bill and Melinda Gates)
:harr: :chee: :b: